Behringer Xenyx Q802USB, igwekota di nma maka pọdkastị | Akụkọ akụrụngwa
Ibido n’ụwa nke pọdkastị dị mfe, mana mgbe izu ole na ole gachara ị chọrọ ime ihe dị iche, nke ahụ bụ mgbe ihe niile gbagwojuru anya. No naghịzi eji naanị iPhone na ekweisi ya na ọ na-eweta na igbe, ọbụnadị kọmputa gị na igwe okwu. Chọrọ inwe ndị ọzọ sonyere, gbakwunye onye ọbịa oge ụfọdụ, tinye ụfọdụ egwu ma ọ bụ mmetụta pụrụ iche, ma mesịa mechaa gbasaa ya. Enwere otutu uzo ozo, site na ndi na achoghi ego obula (ngwa dika Soundflower) iji mezue ulo akwukwo ndi ozo di ole na ole. Anyị edozila na nhọrọ nke etiti: igwekota Behringer Xenyx Q802USB. Ọnụ ya, nha na arụmọrụ ya mere nhọrọ kachasị mma maka ọtụtụ. Anyị na-enye gị nkọwa dị n'okpuru.
1 Ngwakọta maka onye ọ bụla
2 Njikọ USB, mmepụta AUX na preamp
3 Njikọ nke ụdị niile
4 Njikwa niile n’aka gị
5 Ezigbo maka ndị mbido na ndị ọkachamara
Ngwakọta maka onye ọ bụla
Ọ dị mfe ịhụ ọnụahịa nke ụdị ngwaọrụ ndị a. Naanị ị ga-ele Amazon anya ma ị ga-ahụ na enwere ngwaahịa ndị ọnụahịa ha na-enyo enyo ma nwee echiche ndị na-adịghị mma nke ndị ọrụ, nye ndị ọzọ na-enweghị ike inweta maka ọtụtụ mmadụ. Ngwakọta Xenyx Q802USB dara n'okpuru njedebe € 100 Echere m na ọ nwere ike ịlele njedebe nke ọtụtụ ndị na-abụghị ndị ọkachamara ga-akara mgbe ha na-etinye ụdị ego a. Ma ọ bụrụ na anyị gụọ nkọwa ya, ha dị elu karịa nke ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ yiri ya mana ọnụ ahịa dị elu.
O doro anya na ihe anyị enweghị ike ịrịọ maka ọnụahịa a bụ ogo dị ka nke tebụl ndị ọkachamara. Plastic na mpempe akwụkwọ aluminium dị mkpa bụ ihe anyị ga-ahụ na igwekota aKa anyi ghara iju onwe anyi, ya mere anyi gha acho ezigbo akpa njem iji chebe ya, ma oburu na anyi choro ibu ya site n'otu ebe rue ebe ozo, ihe puru ime karia n'ihi oke ya na ibu ya, otu n'ime uru ya karia ndi ozo ...
Njikọ USB, mmepụta AUX na preamp
Tebụl Xenyx Q802USB nwere ụfọdụ ihe dị iche na ya dị iche na tebụl ndị ọzọ nke otu ọnụahịa ahụ, nke ahụ na-emekwa ka ọ bụrụ ihe kachasị amasị ha niile. Nke mbụ ga-ekwe omume ijikọ ya na USB nke kọmputa gị, nke ga - enyere gị aka ịhọrọ interface ahụ maka ntinye ụda ma ọ bụ mmepụta. Ọ dịghị obere ihe dị mkpa bụ mmepụta AUX, ma ọ bụ kama, FX Zigara dị ka a na-akpọ ya na ngwakọta, ezigbo maka izipu ụda site na ọwa ọzọ karịa nke isi ka anyị ga-akọwa mgbe e mesịrị. N’ikpeazụ ya preamplifier, nke ga-eme ka ọtụtụ igwe okwu na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu (anyị ga-ekwu maka ụdị igwe okwu na isiokwu ọzọ). Ga - ahụ tebụl ole na ole nwere njirimara atọ a na n'okpuru 100, ọbụlagodi € 200 M ga - anwa ikwu.
Njikọ nke ụdị niile
Anyị nwere njikọ 2 maka igwe okwu XLR (1) na preamps ha nke na-aga + 60DB nke uru, karịa ezuru ka igwe okwu gị dị ike nụrụ. Ihe kachasị mma bụ na ọ na-achịkwa ya n’etinyeghị mkpọtụ. N’ụzọ doro anya, ụda mkpọtụ karịa ga-apụta, n’ihi na igwe okwu ga-eburu mkpọtụ niile gbara gị gburugburu, mana nke ahụ ga-abụ okwu gbasara ịchọta ọnọdụ zuru oke nke ga-enyere gị aka ime ka olu gị ruo n’ọkwa achọrọ na-enweghị eburu mkpọtụ site na ihe niile gburugburu gị. Inwe njikọ abụọ dị mma ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịdekọ na onye na "ụlọ ihe nkiri" gị, yabụ ịghara ịkekọrịta igwe okwu.
Also nwekwara ntinye abụọ ọzọ (2,3) nke ị nwere ike jikọọ iPhone gị iji tinye egwu, iPad iji jikọọ Skype, ma ọ bụ ụda isi ị chọrọ. I nwekwara ike iji Stereo Aux Return (4) dị ka ntinye ụda ma ọ bụrụ na ịchọrọ ya.
Mana otu n'ime ike nke igwekota a bụ FX Send, nke a na-akpọkarị AUX Out na consoles ndị ọzọ. Mmepụta ọdịyo a dị mma maka ịnwe ike idekọ pọdkastị site na iji Skype, ebe ọ na-enye gị ohere ịhọrọ nke ọwa ọdịyo sitere na njikwa ahụ ka ọ banye na FX Send a iji zighachite ha na Skype ma nọrọkwa onwe ha na isi mmepụta nke njikwa. Kedu ihe anyị ga-esi na nke a? Na ndị na-agwa gị okwu Skype anaghị ara ara site n’olu nke ha na-abịakwute ha, na ị nwekwara ike ịgbakwunye ọdịyo na mmetụta ndị ọzọ na ụda gị wee zigara ha Skype.
Ọ bụrụ na okpokoro nwere ọtụtụ ntinye, ọ nweghị obere ntinye. Na mgbakwunye na njikọ USB nke na-enye gị ohere izipu ụda na kọmputa gị site na njikọ a, ị nwere mmepụta maka ekweisi (6), ọzọ maka njikwa ya na njikọta abụọ (7) yana isi ihe ọzọ dị na njikọ njikọ jaak abụọ ọzọ (8) Ọbụna na ala tebụl ahụ ị nwere ntinye RCA ọzọ (9). N'ezie ọ gaghị abụ n'ihi enweghị njikọ.
Njikwa niile n’aka gị
Behringer Xenyx Q802USB console na-enyekwa gị ohere ijikwa ọkwa ụda nke isi mmalite ya ọ bụla. Na mgbakwunye na ịnye gị ike ịgbakwunye mkpakọ na ụda nke igwe okwu gị ejikọrọ (10), nhazi nha zuru oke na-enye gị ohere ịhazigharị ọkwa nke isi ntinye anọ dị mkpa (11). Dị ka anyị kwuru na mbụ, njikwa ahụ na-enye gị ohere ikpebi nke ọwa a na-ezigara na mmepụta FX Send (12), ọbụlagodi ọkwa ọkwa ọdịyo ha zigara. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka eziga ọwa site na mmepụta ahụ, ị ​​ga-etinye ya na efu, tụgharịa kpamkpam n'aka ekpe. Enweghi njikwa PAN maka igwe okwu na ntinye nke ntinye ederede (13).
Ihe ntinye ntinye odi nma nke 4 nwere njikwa okwa mputa maka isi ihe. Yabụ ọ bụrụ na igwe okwu gị nwere ọkwa dị mma mana mkparịta ụka nke sitere na Skype gaa na otu ntinye ntinye batara na ọkwa dị ala, ịnwere ike iji mkpirisi ndị a na-atụgharị ya n'ụzọ dị mfe (14). Nwere ike ime otu ihe site na isi igwe isi (15) yana isi ihe agwakọta nke na-agabiga USB (16).
Ezigbo maka ndị mbido na ndị ọkachamara
O doro anya na ọ bụrụ na ọrụ gị dị mma na-edezi ihe a na-agwakọta ga-adị mkpụmkpụ, mana ịsị na ọ bụ ezigbo njikwa maka ndị na-amalite n'ụwa a bụ okwu ekwesighi. The Behringer Xenyx Q802USB bụ igwekota na, n'ihi arụmọrụ ya na ogo nke usoro ọ na-arụ, dị n'ogo nke ọtụtụ njikwa ọkachamara ndị ọzọ dị oke ọnụ.. O doro anya na mgbe ị nwere tebụl «PRO» n'aka gị, Behinger dị ka ihe egwuregwu ụmụaka, mana ozugbo i jiri ya ma nwee ekele maka nsonaazụ gị, echiche gị ga-akawanye mma nke ukwuu, ọkachasị mgbe ị maara ihe «PRO» tebụl ọnụ.
Egwu Xenyx Q802USB
Ìhè na kọmpat
Ntinye na ụzọ nbata ọ bụla
Preamps, USB na Aux pụta
Enweghị igbu ọkụ
Ihe ngosi dị mma
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Behringer Xenyx Q802USB, ezigbo igwekota maka pọdkastị
Ndewo, m ga-achọ ịma otu esi edozi nsogbu nke adịghị adị nke ihe nkasi obi na-enye m mgbe m na-edekọ. Na mbụ ọ dịghị otu ahụ. Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi na m kwukwara ọzọ plugins na kaadị dara ada… ..
10 aghụghọ ịghọ onye ọkachamara WhatsApp